I-Trends Yonke Injiniyela Yohlelo Lokusebenza Kwamaselula idinga Ukwazi Yango-2020 | Martech Zone
Nomaphi lapho ubheka khona, kuyacaca ukuthi ubuchwepheshe beselula sebuhlanganiswe nomphakathi. Ngokuvumelana ne Ucwaningo Lwezimakethe Olwehlukene, usayizi wemakethe yohlelo lokusebenza lomhlaba wonke ufinyelele ku- $ 106.27 billion ngo-2018 futhi kulindeleke ukuthi ufinyelele ku- $ 407.31 billion ngo-2026. inani elethwa uhlelo lokusebenza kumabhizinisi ayikwazi ukubhalwa phansi. Njengoba imakethe yeselula iqhubeka nokukhula, ukubaluleka kwezinkampani ezibandakanya amaklayenti azo ngohlelo lokusebenza lweselula kuzoba phezulu kakhulu.
Ngenxa yokuguquka kwethrafikhi isuka kwimidiya yewebhu yendabuko iye kuzinhlelo zokusebenza zeselula, isikhala sohlelo lokusebenza sidlule ezigabeni ezisheshayo zokuziphendukela kwemvelo. Kusukela ezinhlotsheni zezinhlelo zokusebenza kuya kumathrendi wokuklanywa kohlelo lokusebenza lweselula, kunezici eziningi okufanele uzicabangele lapho unquma ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza lwebhizinisi lakho. Ukwakha uhlelo lokusebenza nokuluphonsa esitolo sohlelo lokusebenza ngeke kusebenze kahle ekuguquleni amakhasimende. Ukuzibandakanya kwangempela nokuguqulwa kudinga umuzwa womsebenzisi onomthelela.
Izidingo eziguqukayo zamakhasimende ziguqula izidingo zemakethe, futhi ukusebenzisa ukucabanga kokuklama kokuthuthukiswa kohlelo lwakho lokusebenza kubalulekile. Unalokho engqondweni, kunezindlela ezithile zokwakhiwa kohlelo lokusebenza lweselula kusuka ku-2019 okufanele uzikhumbule phakathi nenqubo yentuthuko engahle ichaze u-2020.
Ithrendi 1: Idizayini Enokuthinta Okusha Engqondweni
Ukuthinta okuyisisekelo okusetshenziswe kuzinhlelo zokusebenza zeselula kuze kube manje kube ukuswayipha nokuchofoza. Amathrendi we-UI weselula ngo-2019 afaka lokho okwaziwa ngokuthi Izenzo ZikaTamagotchi. Yize leli gama lingadala ukubuyela emuva ezifuyweni ezibonakalayo, ukuthinta kukaTamagotchi kuzinhlelo zokusebenza zeselula kungeza ibanga eliphakeme lezakhi zemizwa nezabantu. Inhloso yokusebenzisa lezi zici kudizayini yakho ukuthatha izingxenye zezinhlelo zakho zokusebenza ezingasebenzi kahle maqondana nokusebenziseka kwayo futhi uzithuthukise ngentelezi abasebenzisi abazibandakanya nayo ukuthuthukisa ulwazi lwabo jikelele.
Ngaphandle Kokuthinta KukaTamagotchi, ukuthambekela kohlelo lokusebenza lweselula kuzoba nabasebenzisi abazibandakanya nezinto ezikusikrini ngokusebenzisa ukuswayipha ngokuswayipha ngokuchofoza. Ukusuka ekwakhiweni kokuthumela imiyalezo ngokuswayipha kuya kuzimpawu zokuswayipha ezisetshenziswe njengesici esiyinhloko kuzinhlelo zokusebenza zokuphola, ukuswayipha sekuyindlela yemvelo kakhulu yokuxhumana nesikrini sokuthinta kunokuchofoza.
Ithrendi 2: Gcina Usayizi Wesikrini Nobuchwepheshe Obugqokekayo Engqondweni Lapho Wakha Izinhlelo Zokusebenza Zamaselula
Kukhona ukuhlukahluka okukhulu uma kukhulunywa ngosayizi wesikrini. Ngokufika kwama-smartwatches, ukubukeka kwesikrini sekuqalile nokuhluka. Lapho uhlela uhlelo lokusebenza, kubalulekile ukwakha ukwakheka okuphendulayo okungasebenza njengokuhlosiwe kunoma yisiphi isikrini. Ngenzuzo eyengeziwe yokusebenzisana nama-smartwatches, uqinisekile ukwenza kube lula kumakhasimende akho ukuhlanganisa uhlelo lwakho lokusebenza kalula nangokuzilibazisa ezimpilweni zabo. Ukuhambisana kwe-Smartwatch iya ngokuya ikhula ibucayi, futhi ngenxa yalokho kwaba umkhuba omkhulu we-UI weselula ngo-2019. Ukufakazela lokhu, ngo-2018, kwakukhona ama-smartwatches ayizigidi eziyi-15.3 athengiswa e-United States kuphela.
Ubuchwepheshe obugqokekayo imboni ezoqhubeka nokukhula ichaze izitayela zokwakhiwa kohlelo lokusebenza lweselula kulo nyaka. Ngokuzayo, izinhlelo zokusebenza kuzodingeka zifake imisebenzi engokoqobo eyengezelwe izibuko ezihlakaniphile. Ukuthuthukisa isu le-AR manje nokusebenzisa lezo zici kuhlelo lokusebenza leselula kungadlala indima ebalulekile ekutholeni ukwethembeka kwabathola kuqala.
Ithrendi 3: Amathrendi Wokuklama Uhlelo Lokusebenza Kweselula agcizelela i-Colour Scheme
Imibala ihlanganisa umkhiqizo wakho futhi ixhunyaniswe ngokuseduze nobunikazi bomkhiqizo wakho. Yilokho kanye ubunikazi bomkhiqizo obusiza amabhizinisi ukuxhumana namakhasimende abo wesikhathi esizayo.
Yize isikimu sombala singahle sibonakale sengathi kufanele kube ukukhathazeka okuyisisekelo noma ukuthambekela kokuqanjwa kohlelo lokusebenza okusobala, izinguquko ezicashile emibala zingaba yimbangela yokuphendula kokuqala noma okuhle kohlelo lwakho lokusebenza - okuvelayo kokuqala kwenza umehluko.
Ithrendi eyodwa yohlelo lokusebenza lweselula esetshenziswa kaningi ukusetshenziswa kwama-gradients ombala. Uma ama-gradients engezwa ezintweni ezibandakanyayo noma ngemuva, afaka ukudlidlizela okwenza uhlelo lwakho lokusebenza luhehe kakhulu futhi ligqame. Ngaphezu kwemibala, ukuhamba ngaphesheya kwezithonjana ezimile nokuhambisa izithombe ezithuthukisiwe kungenza uhlelo lwakho lokusebenza lubambe iqhaza kakhulu.
Ithrendi 4: Umthetho Wokwakheka Kweselula we-UI ongalokothi Uphelelwe isitayela: Ukugcina ulula
Akukho okubangela ikhasimende ukuthi lisuse uhlelo lwakho lokusebenza ngokushesha kunezikhangiso ezingenayo noma i-interface yomsebenzisi eyinkimbinkimbi ngokweqile. Ukubeka phambili ukucaciseleka nokusebenza kwenani lezici kuzoqinisekisa ukudala umuzwa ongcono wamakhasimende. Kungezinye zezizathu zokuthi kungani ukuthambekela kokuklanywa kohlelo lokusebenza kugcizelela ubulula unyaka nonyaka.
Ukuze ufeze lokhu, kubalulekile ukusizakala ngosayizi abahlukahlukene besikrini, njengoba kushiwo ngaphambili. Imiklamo emincane ivumela abantu ukuthi bagxile entweni eyodwa ngasikhathi sinye futhi bagweme ukulayishwa ngokweqile okuvame ukuholela ekutheni abantu babe nokuhlangenwe nakho okungekuhle. Okulula ukusebenzisa isici somklamo we-UI weselula ukuhlanganiswa kokuhlangenwe nakho kwendawo okwenziwe ngokwezifiso. Lokhu kusebenzisa amasevisi endawo abasebenzisi beselula abawamukele ngomdlandla njengoba isikhathi sihamba.
Umkhuba 5: Kusetshenziswa iSprint Stage of Development
Inqubo yokuthuthuka inezigaba eziningi, kusuka kuma-sprints wedizayini usebenzisa amathuluzi wokuhlanganisa wohlelo lokusebenza ekwakheni isibonelo, ukuhlola nokwethula uhlelo lokusebenza. I-sprint yokuqala idlala indima ebaluleke kakhulu ekuboneni izindawo ezisemqoka abasebenzisi bakho abazichitha isikhathi esiningi futhi baqinisekise ukuthi lezo zindawo zikhuluma indaba yomkhiqizo wakho ngenkathi ziletha umuzwa wohlelo lokusebenza oluyingqayizivele kubasebenzisi. Akumangalisi-ke ukuthi le nqubo ifika ohlwini lwethu lwamathrendi wohlelo lokusebenza lweselula okufanele silubuke.
Ukukhetha ukuzibandakanya ku-initial I-5-day design sprint ingasiza ukukhomba nokuqinisa izinhloso zohlelo lokusebenza. Ngokwengeziwe, ukusebenzisa i-storyboarding nokwakha uhlobo lokuqala lokuhlola nokuqoqa impendulo kungenza noma kuphule umkhiqizo wokugcina. Le nqubo iqinisekisa ukuthi ungena esigabeni sokuthuthuka ngezinjongo ezichazwe ngokucacile, ezikhethwe ngamasu. Futhi, ikunikeza ukuzethemba kokuthi iphrojekthi yakho yokuthuthukisa uhlelo lokusebenza izophumela ekuguquleni umqondo ube ngokoqobo.
Qiniseka ukuthi i-Mobile App Design yakho ingcono kakhulu
Ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza lweselula sekuba yimfuneko yokubandakanyeka kwamakhasimende nokutholwa. Okubaluleke nakakhulu ukuqinisekisa ukuthi uhlelo lokusebenza olwenziwe lusezingeni eliphakeme futhi lunikeza umuzwa omuhle wamakhasimende. Empeleni, Ama-57% we-inthanethi abasebenzisi bathi ngeke bancome ibhizinisi ngeplatifomu eyakhiwe kabi online. Ngaphezu kwengxenye we-intanethi wezinkampani manje uvela kumadivayisi eselula. Ukugcina lokho engqondweni, i-UX yingxenye ebaluleke kakhulu yokukhipha uhlelo lokusebenza lwebhizinisi. Kungakho ukugcina izinto ezifana nezindlela zokuklama zohlelo lokusebenza lweselula kubaluleke kakhulu.
Inguquko yeselula igcwele ngokugcwele. Ukuchuma esikhaleni samanje sesimakethe, ukusebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, ukugibela igagasi lentuthuko, nokuhlala wazi amasitayela wokuklanywa kohlelo lokusebenza wanamuhla kukuqinisekisa ukuthi uhlala ufanelekile futhi uyakwazi ukunakekela izidingo zamakhasimende akho.
Tags: umbala wohlelo lokusebenza lweselulaizitayela zokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselulainani lohlelo lokusebenza lweselulaisicelo mobileisikhombimsebenzisi somsebenzisi weselulaSprinttamagotchi ukushukuma komzimbaizitayelaubuchwepheshe obugqokekayo